Dagaalkii galabta lagu qaaday Maleeshiyada Riddada ah oo soo gaba gaboobay iyo Mujaahidiinta oo hore usii durkay. | Halganka Online
Dagaalkii galabta lagu qaaday Maleeshiyada Riddada ah oo soo gaba gaboobay iyo Mujaahidiinta oo hore usii durkay.
Waxaa fiidnimadii caawa soo gaba-gaboobay dagaal culus oo ay galabta Mujaahidiintu ku qaadeen fariisimaha Maleeshiyada Riddadu kaga sugnaayeen qaybo ka mid ah degmada Boondheere ee magaalada muqdisho, halkaas oo ay mujaahidiintu goobo hor leh gacanta ku dhigeen.
Waxaa galabta markay saacadu ahayd 5:20pm daqiiqo weerar ku qaaday fariisimaha Murtadiinta Sariyo katirsan Liwaaga Cali ibnu Abii Daalib ee ka howl gala Wilaayada Islaamiga ah ee Banaadir, halkaas oo ay kula wareegeen goobo muhiim ah oo ay kamid tahay Wasaaradii hore ee arimaha Gudaha, Safaaradii Talyaaniga iyo Xarunta Degmada Boondheere ee Magaalada Muqdisho.
Afhayeenka Ciidamada Mujaahidiinta Al-Shabaab Sheekh C/casiis Abu Muscab, oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in ay Mujaahidiintu Allah fadligii dagaalka markii uu socday wakhti kooban ay la wareegeen difaacyadii ay ku sugnaayeen kooxda riddadu goobahaas oo ay gabalka ugu dhacday iyadoo ay Mujaahidiintu weli goobihii ku suganyihiin.
Sh.C/Caziiz Abu Muscab ayaa sheegay in markii Maleeshiyada Riddada ah laga saaray difaacyadii ay Saliibiyiinta Yugaandha iyo Burundi ay duqaymo aan loo meel dayin la beegsadeen xaafada Magaalada Muqdisho oo ay ku jiraan xaafada ay iyagu ku suganyihiin sida Xaafada Xamarweyne, waxaa kale oo duqaymaha xoogoodu ku dhacayaan degmooyinka Deyniile, Yaaqshiid, iyo Kaaraan goobahaas oo dhamaantood aad uga fog goobaha lagu dagaalamay.
Horjoogayaasha Maleeshiyada Riddada ah oo iyagu ku can baxay beenta xad dhaafka ah ayaa ku kala qaybsamay khasaaraha kasoo gaaray dagaalka, Horjooge Dhega-badan ayaa sheegay in hal askari uu ka dhintay 2 kalena ay ka dhaawacmeen, Halka mid kale oo la hadlay Horn Afrik uu sheegay in hal askari oo kaliya uu ka dhaawacmay kaas oo hada difaaciisii weli ku jira sida uu hadalka u dhigaye, arintaas oo ah caado ay ku dhaqmaan Maleeshiyada Riddadu.
Dagaalka ayaa hada istaagay iyadoo Ciidamada Mujaahidiintu ay Difaac ka xirteen Xarunta degmada Boondheere, halka Maleeshiyadii Riddada ahayd ay u firxadeen dhinaca Hotel Curuba iyo Bangigii hore ee Ganacsiga.
« Wilaayada Islaamiga ah ee Gedo oo maanta ka warbixisay waxyaalihii u qabsoomay bishii “Rajab” ee dhamaatay. Masuulka ugu sareeya Maktabka Diiwaanka Zakada oo maanta la magacaabay. »